Gen. Shire, M/weyne ku xigeenka Puntland, oo qaabilay qunsulka cusub ee Ethiopia u fadhiyi doona Puntland & xafiiska qunsuliyadda oo laga furay Garowe. – Radio Daljir
Garowe, May 29 – Xaflad maanta lagu qabtay caasimada Puntland ee Garowe ayaa lagu iclaamiyey furitaanka qunsuliyadda dawlada Ethiopia ee Puntland.
Waxaa sidoo kale ay dawlada Puntland qaabishay qunsulka dawlada Ethiopia u fadhiyi doona Puntland, Md. Asmalash.
Gen. Shire oo ka hadlay munaasabada lagu furay qunsuliyadda ayaa sheegay in qunsilayddu ay xoojin doonto xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada ummadood ee dhinacyada ganacsiga, amniga, iyo isu-socodka bulshada.
Md. Asmalash oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in uu sido dhambaal Puntlnad uga yimid dawlada Ethioipia, gaar ahaan wasaarada arrimaha dibedda oo uu sheegay in ay aad u faraxsan yihiin qunsuliyadda laga furay Puntland.
Mar uu ka hadlay ahmiyadda qunsuliyada ayaa uu sheegay in ay tahay sidii loo sahli lahaa xiriirka u dhexeeya Ethiopia & Puntland, iyo sidii dadka u safraya Ethiopia loogu sahli lahaa safaradooda.
Munaasabada ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka tirsan golayaasha Puntland.
Ethiopia ayaa hore qunsiliyad uga furatay Hargeysa, Somaliland.